နမ့်ဆန်က လက်နက်ကြီးထိတဲ့အရပ်သား တိုက်ပွဲကြား ပိတ်မိပြီး သွေးထွက်လွန်သေဆုံး
နမ့်ဆန်က လက်နက်ကြီးထိတဲ့အရပ်သား တိုက်ပွဲကြား ပိတ်မ...
14 ก.ย. 2562 - 20:57 น.
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ့်ဆန်မြို့အနီးမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ TNLA တို့အကြား စက်တင်ဘာ၁၄ ရက်နေ့တိုက်ပွဲ မှာ လက်နက်ကြီးထိတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ ဦးအိုက်ထွန်းဟာ သွေးထွက်လွန်ပြီး နေ့လယ် ၃ နာရီလောက် ကသေဆုံးသွားတယ်လို့ နမ်ဆန် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တွေက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ် ။
သူ့ကို သွားကယ်ထုတ်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ က ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မြန်မာတပ်မတော် ကလုံခြုံရေးအရ သွားဖို့ ခွင့်မပြုခဲ့ဖူးလို့လည်း ရှင်းပြပါတယ်။
နေ့လည် ၃နာရီကျော်လောက်မှာတော့ ကယားကြီး ရွာ မှာ ကျန်းမာရေးဘက်က ဝန်ထမ်းတွေ ဆေးကုသပေးနေတုံးဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအိုက်ထွန်း ဟာ လက်နက်ကြီးမှန်လို့ ပေါင်နဲ့ လက်မောင်းမှာ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရ ရှိနေသူဖြစ်ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၃၁ရ က်နေ့ ကလည်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မော်ဟစ်ကျေးရွာ က အရပ်သားနေအိမ် ပေါ်ကို လက်နက်ကြီးကျည် ကျလို့ လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦး အပါအဝင် ကလေးမိခင်နဲ့အခြား ၈ နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦး၊ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူ တစ်ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်း ၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ ပါတယ်။
ပန်တူအူကျေးရွာက ဦးအိုက်ထွန်းအသက်၆၅ နှစ် ဟာ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် မနက်ပိုင်း ၉ နာရီမှာ တိုက်ပွဲအတွင်း နေအိမ်ပေါ် မှာနေရင်းလက်နက်ကြီးထိမှန် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ကယားကြီးကျေးရွာအထိ သယ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးနောက် အဲဒီရွာမှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မျက်မြင်တွေ့တဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကတော့ "ဘယ်ဘက်ဒူးဆစ်ကနေစပြီးတော့ အောက်ဖက်ကြေပြီး တွဲလောင်းဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်လက်မောင်း လက်နက်ကြီးအစ ထိမှန်ပေါက်ထွက်ပြီး အရိုးကျိုးသွားတာပါ" လို့ ပြောပါတယ်။
"အဓိက ဆေးရုံကို အချိန်မှီ မရောက်နိုင်တာပါ။ သွေးထွက်လွန်နေတာလေ။ သူလည်း မခံနိုင်တော့ ဆုံးသွားတယ်" လို့ လည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်။
ကယားကြီးရွာလမ်းကနေ မြို့ထဲသို့အသွားမှာ တပ်မတော်က တားဆီးခဲ့တာကြောင့် သွားလို့မရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်နဲ့ တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အကြား တိုက်ပွဲတွေဟာ စက်တင်ဘာလ၁၄ရက် ညနေပိုင်းအထိ ဆက်တိုက်နေတုန်းပဲလို့သိရပါတယ်။
နမ်ဆန်နဲ့ ၇ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ တောင်ရိုးဘုရားအနီးမှာ တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက် ရာနဲ့ချီတဲ့ ဒေသခံတွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေ ဟာ၂ရက်ဆက်တိုက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပြီးတော့ နမ့်ဆန်မြို့ အနီးက ဇယန်းကြီး၊ ဟိုချောင်း၊ ပန်တူအူ၊ မန်ဆာ အစရှိတဲ့ကျေးရွာတွေက ဒေသခံတွေဟာ နမ့်ဆမ်မြို့ ပေါ်နဲ့ ကျောက်မဲမြို့တွေပေါ်ကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။
တိုက်ပွဲရှောင်သူ အရေ အတွက်ဟာ တစ်ထောင်ကျော်ရှိပြီးတော့ ဇယန်းကြီးရွာမှာ အများဆုံး ဖြစ်ကာ ၇၀၀ကျော်လောက်ရှိတယ် လို့လည်း ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
နမ့်ဆန်မြို့အနီးမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့အကြား မကြာ ခဏဆိုသလို တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ နှစ်ဘက်တပ်တွေကြား လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ် နေကြသလို မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်ကရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ လေကြောင်းပစ်ကူပေးတာကို ၂ ရက်စလုံးမှာ တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ နမ့်ဆန်က လက်နက်ကြီးထိတဲ့အရပ်သား တိုက်ပွဲကြား ပိတ်မိပြီး သွေးထွက်လွန်သေဆုံး